Ucam, oo ah kamaradda yar ee sirta ah ee la ilaaliyo
Ucam, kamaradda yar ee ilaalada ah ee la duubay oo amaan ah
Ucam waa kaamero yar oo ka socota shirkada IoTeX taas oo, marka lagu daro soo bandhigida astaamaha ilaalada ee ugu dambeysay suuqa, balan qaadaya arimaha gaarka amniga mahadsanid xannibaadda iyo xog-qarinta.
Sabab kasta oo aan u dooneyno inaan ku rakibno kamarad ilaalin guriga ama xafiiska, hal shay ayaa hubaal ah, waa inaynaan doonaynin in lagu basaaso soo noqoshada!
Nasiib darrose, dhowr shirkadood ayaa la kulmay fadeexado kaamerada jabsiga kamaradaha. Sidaas darteed, dad badan ayaa hadda diidan inay mid helaan.
Si ka duwan kamaradaha kale, Ucam wuxuu adeegsadaa xannibaadda si loo bixiyo amniga aan runti haysanoBaahan. Blockchain iyo encryption si looga hortago jabsiga Muuqaalka ugu weyn ee kamarada Ucam
ayaa ah in ay adeegsato xannibaada si ay u bixiso amniga iyo sirta aan runtii u baahanahay
Asal ahaan, xannibaadda ayaa ah teknolojiyad loogu talagalay kaydinta iyo gudbinta macluumaadka qaata qaabka keydka xogta, laakiin aan ku xirnayn hay'ad dhexe oo kasta. Xawaareheeda ka sakow, waxay leedahay faa iidada inay ahaato mid amaan ah.
Marka la soo koobo, Ucam waxay si toos ah u isticmaashaa tikniyoolajiyadan marka aan ku hagaajineyno kamaraddeena isticmaalka mobilada. Fure u gaar ah 50 xaraf ayaa loo sameeyay isticmaale kasta oo qofna kuma xirmi karo kamaraddeena la'aanteed. nuqul, xitaa shirkadda IoTeX.
Si ka duwan nidaamyada kamaradaha kale, uma baahnid inaad koonto samaysato, wax aan macquul aheyn in la jabsado!
Marka la eego fiidiyowyada la duubay, waa qarsoodi ilaa dhammaad, taas oo ka dhigaysa iyaga oo aan la geli karin iyada oo aan aqoonsigeenna xannibaadda ee kor ku xusan.
Xitaa ku xirnaanta codsi sidan oo kale ah, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad sidaas ku sameyso PIN horay loo soo doortay ama adeegsiga nidaamka bayoolajiga (sawirka faraha, aqoonsiga wajiga, iwm.).
Dulmar guud oo ah waxa aan ka arki karno aaladda gacanta ee mobilka ee ku xiran Ucamkeena.
Astaamaha ugu dambeeyay ee suuqa Thanks to codsiga iswaafajinta, waxaan xakameyneynaa gabi ahaanba waxkasta oo aan qabsano, waxaan doorbideynaa inaan xafideyno macluumaadkayaga si qarsoodi ah, aan ula wadaagno kuwa noo dhow ama aan u idmano adeegsiga adeeg bixiyaasha. Kaamirada ayaa ku qalabeysan astaamaha ugu dambeeyay ee suuqa kormeerka sida:
Waxaa laga duubay fiidiyowga 1080p HD ee ka socda Ucam ilaa aaladda moobaylkaxulashadeena.
Cilmiga 360-degree oo ay kujirto qaabka digsiga, awooda janjeerida iyo ka-dhawaanshaha meel fog.
Motion detection oo kicin kara alaarmiga iyo duubista.
Aragtida habeenkii oo otomaatig ah, taas oo u oggolaanaysa illaa iyo 36 cagood oo aragga ah.
Cod laba-dhinac ah oo noo oggolaanaya inaan cid walba kula hadalno guriga.
Marka la eego cabirka cabirka kamarad, waxaan si gaar ah u jecel nahay cabirkeeda yar, taas oo ka dhigaysa mid wax ku ool ah in lagu qariyo guriga ama xafiiska.
Wax walba runtii way fududahay in lagu rakibo arjiga, kaas oo sidoo kale lagu heli karo Faransiis kuna habboon IOS iyo Android, sidaa darteed xitaa markaan bilow nahay, sifiican ayaynu usameynaa.
Khasaaraha kaliya ee jira ayaa ah in kastoo
uu toogan karo 360 darajo uuna ogaan karo dhaqdhaqaaqa, si otomaatig ah uma raaci doono qofka maraya muraayada horteeda.
Waxaan nahay kuwa ay tahay inaynu gacanta ku dhaqaajinnokaamirada, laakiin qasab maaha inaad kuxirantahay barnaamijka waqtiga oo dhan maalintii.
Marka la eego qiimaha, kaamirada waxaa lagu iibiyaa qiyaastii $ 75 taas oo ay tahay inaad kudarto lacag lagaa soo waarido oo qiyaastii shan iyo toban ah doollarka.
Marka laga hadlayo goobta duubista, Ucam waxay na siineysaa xaq 3 saacadood oo bilaash ah 10kii ilbidhiqsi ee Daruurkooda. Haddii kale, waa inaad doorataa qorshe US $ 20 sanadkii ah oo aan xadidnayn oo leh fiidyowga u dhexeeya 20 ilbidhiqsi.
Waxaad sidoo kale dooran kartaa inaadan isticmaalin adeeggooda kaydinta oo aad wax walba ku kaydsato dhinaceena, adoo adeegsanaya microSD kaarka, laakiin sida iska cad taasi macnaheedu waa qaddar xadidan oo keyd ah.
Waxbadan ka baro kamarada IoTeX ee ilaalada Ucam
Ka hel kamarad Ucam ah Amazon.ca
Qeybtani waxay ka kooban tahay xiriiriyeyaal xiriir la leh. Waxbadan ka baro
Kahortag daadinta iyo waxyeelada biyaha leh qalabkaan casriga ah ee digniinta ka bixiya taleefankaaga
2021-06-19 08:20:03 | Guri
Hoyga Ka-hortagga daadashada biyaha iyo waxyeelada dareemayaashaan caqliga badan ee taleefankaaga uga digaya Iska ilaali dhibaatada iyo kharashaadka waxyeelada biyaha adoo lagu ogeysiiyo markii daadku yimaado. Dareemayaasha caqliga badan ee Phyn ayaa nooga sheegaya taleefankeena casriga ah wax yar o...
La soco hurdadaada kaaliyaha codka jiilka 2aad ee Google Nest Hub
2021-03-31 20:19:39 | Guri
La soco hurdadaada kaaliyaha cod ee Google Nest Hub jiilka 2aad Google wuxuu bilaabayaa jiilka 2aad ee kaaliyaha codkiisa oo leh bandhig: Nest Hub. Marka lagu daro hagaajinta tayada codka ee ku hadla afkiisa 50%, ugubnimada weyn ee Nest Hub waa inay la socon karto lana socon karto hurdadeena. Muuqaa...
Ulaab si fiican uguna waxtar badan abid Cordless HydroPulser
2021-03-31 20:18:25 | Guri
Home Floss Ayaa Si Waxtar Leh Uga Wanaagsan Waligiis Iyadoo La Adeegsanayo HydroPulser Cordless La kulan Waterpik Cordless HydroPulser, oo ah qalab ku beddelaya ilkaha ilkaha diyaarad biyo ah si looga saaro huurada badan loona hagaajiyo caafimaadka ciridka. La qaadan karo oo aan xadhig lahayn, qalab...
Echo Show 10: kaaliyaha codka ee si toos ah noola socda guriga
2021-03-30 20:04:57 | Guri
HomeEcho Show 10: kaaliyaha codka ee si toos ah noola socda guriga Amazon wuxuu bilaabay kaaliye cusub oo cod leh shaashad 10.1 inji ah, Echo Show 10. Marka lagu daro ka caawinta howlahayaga, codsiyadayada maalinlaha ah iyo aaladaha otomatiga ee guriga, kaaliyaha wuxuu u taagan yahay awoodiisa inuu ...